Iyada oo la adeegsanayo Nidaamka Ururinta Ujuurada Elektaroonigga ah ee ay maamusho ESHOT, sameynta degmada Izmir Magaalo-Weyne, Kaararka İzmirim kaararka waxaa lagu buuxin karaa iyadoo la siinayo mar keliya ama tilmaamaha rarka otomaatiga ah ee kaarka amaahda. Su’aasha [More ...]
Khabiirka ku takhasusay daaweynta 'Dorn Therapy' üağla Yüksel, oo sharraxay xiriirka ka dhexeeya isku dheelitirka jirka iyo nolosha bulshada iyo aqoon isweydaarsiga jimicsiga, jirka iyo isku dheellitirka, ayaa tababar siiyay shaqaalaha TÜDEMSAŞ. TÜDEMSAŞ Bekir Torun ayaa lagu qabtay qolka kulanka [More ...]
Barış Manço Ferry, oo ay cusbooneysiisay mid ka mid ah isutagga degmada Caabudwaaq, ayaa safarkiisii ​​ugu horreeyay ku sameyn doona fanaanka aan la ilaawi karin sanadkiisii ​​21aad dhimashadiisa. Turki, oo naga tagay 21 sano ka hor, kuna noolaa qalbigeenna iyo afkeenna heesayadiisa, [More ...]
Qariiradda metrooga ee Istanbul 2020: Iyada oo la adeegsanayo dhismayaasha metrooga ayaa bilaaban doona sannadka soo socda, oo leh khadka 2030 kilomitir dhamaadka 776, Istanbul waa shabakadda metroga labaad ee ugu dheer adduunka kadib New York. [More ...]
Tareenku wuxuu marayay saldhiga tareenka Piribeyler ee degmada Büyükorhan, oo 105 kiiloomitir u jirta bartamaha magaalada Bursa, muddo 85 sano ah, laakiin dadka magaalada badankood ma oga. Inta badan dadka ku nool Bursa waxay leeyihiin tareen mara magaalada. [More ...]
Sigaar cabista, iibinta tobaakada iyo waxyaabaha tubaakada ka sameysan ayaa gabi ahaanba laga mamnuucay xarumaha tareenka ee Nederland gudaha xaddiga aalkolo la'aan. Maalmaha soo socda, qeybaha sigaarka ee dhammaan xarumaha waa laga saari doonaa. Ilaa Abriil 1, sigaar cabista [More ...]
"2020 International Sky Observation Festival", oo martigalin doonta kaqeybgalayaasha caalamiga ah markii ugu horeysay sanadka 2020, ayaa lagu qaban doonaa 20-23 August 2020 magaalada Antalya Saklıkent. Araajida dabbaaldegyada, oo kun qof oo kuwa cilmiga xiddigiska ah ay ku go'aansan doonaan wax badan [More ...]